Nyamavhuvhu anotanga kuratidzwa pamapuratifomu ausingakwanise kupotsa | Bezzia
Susana godoy | | Nhau
Hausi mubvunzo wekupa mazita asina kujairika, asi uchitarisa kune ese mazita ayo ave anotarisirwa kwazvo mwaka. Nekuti mamwe eiyo Gunyana kutanga Isu tanga tavaziva uye nekuti vamwe vaipa zvakawanda zvekutaura nezvazvo. Kune izvi zvese uye nezvimwe, kudzokera kuchikoro kunounzawo sarudzo dzakawanda munzira yechiteedzero kana mabhaisikopo.
Zvakawanda zvekuti zvinogona kutokuomera kuti usarudze imwe chete yavo. Naizvozvo, zvakanaka kunyora pasi ese mapuratifomu uye iyo mazuva ekuburitsa kukwanisa kuzvironga zvirinani. Uchaenda kupi kutanga? Chokwadi iwe unenge watove nevamwe vanodiwa pakati pavo vese.
1 Nyamavhuvhu anotangisa, 'Zuva rechitatu'
2 Ratched paNetflix
3 'Dhiyabhorosi maawa ese' ndeimwe yemafirimu ekutanga paNetflix
4 Enola Holmes naMillie Bobbie Brown
5 Alex Rider kuMovistar +
Nyamavhuvhu anotangisa, 'Zuva rechitatu'
Iyi mini-nhepfenyuro inotanga kuratidzwa paHBO uye ine vatobudirira kare. Nekuti mazita avo ndeaya evatambi vakuru uye nhoroondo refu. Hautendi here? Kubva kuna Judha Mutemo kuna Emily Watson. Kubva pane izvo zvatove kuziva izvi, zvinoita sekunge kufarira kwacho kunowedzera kuchingori zvishoma. Inovhura muna Gunyana 14 uye ine zvikamu zvitanhatu, apo patichasangana nemutambi mukuru anosvika pachitsuwa uye imomo anosangana nevagari vemo vane zvitendero zvakasimba. Kunyangwe zvichiratidzika kuti mune zvimwe zvikamu hazvigare zviri zvakafanana protagonist. Ruzivo rwatinofanira kutarisisa.
La Mukoti Ratched inotanga kushanda muchipatara chepfungwa, icho chine mukurumbira mukuru. Asi chokwadi ndechekuti anoita kunge ane mbiri inotapira asi haina kudaro. Mafomu ayo, nzira uye zvimwe zvakavanzika zvakawanda zvichaonekwa mukati meiyi nhorondo nhevedzano kwavari Kana iwe waisaziva, iyo inokurudzirwa ne'Mumwe munhu akabhururuka pamusoro pechiva checuckoo '. Pakutanga kwema90s iye akamedura marudzi ese ezvinyorwa, achikunda maOscar makuru. Saka, nekuda kwechikonzero ichocho, isu tinogona zvakare kuzvinyora pasi mune yedu runyorwa rweakanyanya iwo.
'Dhiyabhorosi maawa ese' ndeimwe yemafirimu ekutanga paNetflix
Zvinotaridza kuti mafirimu ari kuuyawo kuNetflix chikuva. Mune ino kesi, neimwe nyaya yakaoma uye inotyisa panguva imwe chete. Inofanira kutaurwa kuti ndiko kuchinjiswa kwenhau ine zita rimwe chete. gothic kubata iyo ichapa chikuva, asi kana iwe uchida iyi genre, saka gamuchira. Kune rimwe divi, pakati pezviso zvine mukurumbira zvatichaona zvichave Tom Holland uye Robert Pattinson. Ichokwadi kuve chaunofarira zvakare!
Enola Holmes naMillie Bobbie Brown
Ehe, Millie Bobbie zvakare mumwe wevamiriri ve 'Zvinhu zvisinganzwisisike'. Muchokwadi takaona kukura kwainge kuri kuita dzakateedzana seizvi. Asi ikozvino atove nemamwe mapurojekiti senge iyi bhaisikopo kwaanotanga kuita naHenry Cavill. Izvo ndezve wechidiki uyo rimwe zuva paanomuka anoziva kuti amai vake vanyangarika. Iko kunotanga kutsvaga, kubva muruoko rwaEnola uyo ari kuita debut semutikitivha uye ari kuti ane zvakawanda hunhu zvebasa rakadai.
Alex Rider kuMovistar +
Imwe yekuburitswa kwaGunyana kunouya kubva muruoko rwe Movistar +. Mune ino kesi, hupenyu hwaAlex hunotaurwa, ndiani nherera yechidiki. Kunyangwe muhupenyu hwake pagara paine shamwari dzakamukomberedza, mapato uye vasikana, zvinoita sekunge haagari anokwana mune ese nharaunda Iye ane akateedzana hunhu ari kure neayo eeshamwari dzake. Kune izvo uye zvimwe zvakawanda, hupenyu hwaAlex hune zvakawanda zvinoshamisa zvaunogona kuwana munaGunyana 17.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Nhau » Iyo Gunyana inotanga kuratidzwa pamapuratifomu ausingakwanise kupotsa